Home Wararka (DEG DEG) RW Rooble oo joojiyey heshiis shidaal oo Soomaaliya ay saxiixday
(DEG DEG) RW Rooble oo joojiyey heshiis shidaal oo Soomaaliya ay saxiixday
Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa war ka soo saaray heshiis la sheegay in wasaaradda Batroolka Soomaaliya ay la gashay shirkad shidaalka baarta oo laga leeyahay dalka Mareykanka.
Qoraalka ka soo baxay xafiiska Ra’iisul wasaaraha ayaa lagu shaaciyey in heshiiska ay gashay wasaaradda Batroolka uu waxba kama jiraan yahay, isagoo ku goodiyey inuu tallaabo qaadi doono.
“Heshiiska la sheegay in Wasiirka Batroolku uu saxiixay ee la xiriira arrimaha Shidaalka Soomaaliya waa mid sharci darro ah oo aan loo marin waddo shirci ah, sidaas darteed waxba kama jiraan,” ayaa lagu yiri qoraalka Rooble.
Sidoo kale qoraalkaan ayaa intaas ku sii daray, “Ra’iisulwasaraha ayaa qaadidoonaa talaabooyin sharci ah oo looga jawaabayo falkaas xadgudubka ku ah Hantida Qaranka iyo dhaxalka Jiilalka soo socda, si loo ilaaliyo amaanada Ummadda Soomaaliyeed.”
Shirkada ay heshiiskaas u saxiixday wasaaradda batroolka Soomaaliya ayaa lagu magacaabaa Coastline Exploration Limited (“Coastline”) waxaana laga leeyahay dalka Mareykanka, maanta ayey shaacisay in wasaaradda Batroolka Soomaaliya ay la saxiixatay toddoba heshiis oo wax soo saar wadaag ah.
Shirkadaan oo aad u daneysa inay baarto saliida gobolka Geeska Afrika ayaa heshiisyadaan ay la saxiixatay wasaaradda batroolka iyo macdanta Sooomaaliya waxuu u ogolaanayaa inay shidaal ka baarto gunta hoose ee biyaha Soomaaliya.
Richard Anderson, oo ah madaxa fulinta xeebaha ee shirkadda Coastline Exploration Limited ayaa faahfaahin ka bixiyey heshiiska ay la galeen wasaaradda batroolka iyo macdanka ee xukuumadda Soomaaliya.
“Soomaaliya waxaa ku yaalla ceelal dihan oo aad u badan, kuwaas oo aan weli la sahmin, kuna yaalla biyaha kulul ee adduunka, waxaa sharaf iyo farxad noo ah inaan qayb ka noqonno horumarinteeda mustaqbalka,” ayuu yiri Madaxda shirkadda ay heshiiskaan la gashay wasaaradda batroolka.
Waxuu intaas ku sii daray, “Dowladda Soomaaliya iyo Wasaaradda Shidaalka ayaa waqti iyo juhdi badan ku bixiyey sidii dalku u heli lahaa kaabayaal sharci iyo maamul oo ku habboon in lagu taageero baarista shidaalka iyo gaaska, iyadoo la meel marinayo sharciga Shidaalka, ansixinta heshiiska Dakhliga qeybsiga ee Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada Xubnaha ka ah. iyo in la dhiso Hay’adda Batroolka Soomaaliyeed si ay taageero joogto ah ugu bixiso kobaca la filayo.”
Previous article[Deg Deg] Dowladda Federaalka oo xaraashtay 7 ka mid ah ceelasha Shidaalka Soomaaliya
Next articleFahad oo Xanuunkii Ikraan Reer Hiiraan ugu Daray 15 kale lehna Khasab igu Doorta.
Sh. Sharif, Sh. Xasan & C. Guleed oo ku wajahan Kenya...
Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle oo mooshin xil kaqaadis laga gudbiyay